» कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ५ मा विष्णुप्रसाद गौडेल मेक्सम
कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ५ मा विष्णुप्रसाद गौडेल मेक्सम
२८ माघ २०७६, मंगलवार १९:५९
मकवानपुर, २८ माघ । नेपालको पहिलो स्ट्याण्ड अप कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट ५ मा स्याङ्जाका विष्णुप्रसाद गौडेल मेक्सम छनौट भएका छन् । विष्णुले उत्कृष्ट ६ मा दिएको प्रस्तुति पश्चात दर्शकको भोटका आधारमा उनी उत्कृष्ट ५ मा छनौट भएका हुन् । हेरौँ भिडियो–
मेक्सम गौडेलका नामले समेत चिनिने विष्णु स्याङ्जा निवासी हुन् । उनको डायलग डेलिभरी र प्रस्तुत गर्ने शैलीलाई राम्रो मानिएको छ । गत साता उनले पहिलो प्रेमसँग सम्बन्धित प्रस्तुति दिएका थिए । त्यसपश्चातको भोटिङमा दर्शकको मन जित्दै उनले उत्कृष्ट ५ मा प्रवेश पाएका हुन् ।
प्रतियोगितामा अग्रज कलाकार सन्तोष पन्त, लोकप्रिय हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल, निर्देशक प्रदिप भट्टराई र चर्चित नायिका ऋचा शर्माले निर्णायकको भूमिका निभाईरहेका छन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा कमेडी च्याम्पियनको पहिलो विजेता को बन्नेछ छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुमा लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।